Somali News 1.5.22
Published January 6, 2022 at 1:13 PM CST
Iowa ayaa kor u dhaaftay 8,000 oo dhimasho ah oo ka timid COVID-19 iyadoo caabuqyada fayrasku uu kordhay oo si aad ah carruur badan loo dhigay cusbitaalka fayraska.
Waaxda Caafimaadka Dadweynaha ee Iowa Arbacadii waxay dhejisay in ka badan 19,000 oo xaaladood oo la xaqiijiyey usbuucii la soo dhaafay.
Wadarta guud ee dhimashada Iowa ayaa gaartay 8,019, oo ay ku jiraan 161 dhimasho oo dheeri ah oo soo taxnaa ilaa bartamihii Oktoobar.
Khabiir ku takhasusay cudurrada faafa oo ka tirsan Jaamacadda Iowa ayaa sheegay in kala duwanaanshaha omicron uu hadda yahay nooca ugu badan ee Iowa, oo ka kooban ilaa 90% kiisaska.
Caafimaadka Degmada Siouxland oo ka warbixinaya boodboodka weyn ee kiisaska COVID-19 ee Degmada Woodbury. Waxaa jiray 544 xaaladood oo cusub usbuuc gudihii, koror ku dhawaad 2 ½ jeer todobaadkii ka hor. Heerka togan ayaa ka kordhay in ka badan 8% ilaa 14%. Isbitaalada la dhigo ayaa ku kordhay labada cosbitaal ee Sioux City ku dhawaad 30% min 25 ilaa 36 bukaan oo laga helay fayraska. Bukaanno badan ayaa lagu daweynayaa gobolka oo dhan.
Qoraal la soo dhigay baraha bulshada ayaa lagu sheegay in tallaalka iyo daawaynta goor hore ay yihiin qalabka ugu wanaagsan ee looga hortagi karo cudurrada halista ah.
Jaamacadda Nebraska-Lincoln waxay kordhinaysaa waajibaadkeeda maaskaro iyadoo kiisaska fayrasku ku sii badanayaan gobolka, dhammaan ardayda soo laabanaysa iyo macallimiinta waxaa looga baahan doonaa inay qaataan imtixaanka COVID-19 bilawga simistarka gu'ga. Maaskaro ayaa looga baahan doonaa gudaha gudaha xarumaha jaamacadda, oo ay ku jiraan munaasabadaha isboortiga.
Sharci-dajiyayaasha Nebraska ayaa bilaabay kalfadhi cusub oo ay ku jiraan ilmo iska soo ridid muran leh iyo tillaabooyinka xuquuqda hubka iyo diiradda la filayo sida loo isticmaalo in ka badan $ 1 bilyan oo gargaar ah gargaarka masiibada ah taas oo ka dhigtay gobolka lacag.